Home > Soomaali > Health Services > Illness and Communicable Disease
Jirrada iyo Cudurrada La- Is-qaadiiyo, cunuggu waa inaanu imaanin dugsiga (waxaana loo soo dirayaa guriga) haddii uu/ay qabo/qabto:
qandho 100 degrees F (orally) ama ka sarreeyey 24kii saac ee la soo dhaafay HADDII AANU QAADAN daawada qandhada jabisa
Matagayey ama shubmayey 24kii saac ee la soo dhaafay
Firiiric maqaar aan la aqoonsan/gara (an undiagnosed skin rash)
Injir madax aan laga daweyn (untreated live head lice)
Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis ayaa raaca habraacyo ay dejiyeen takhaatiirta maqaarka Waaxda Caafimaadka Bulshada Hennepin County marka go’aan laga gaarayo marka ardayga guriga loo diri karo ama guriga joogayo dugsigana imaanayn. Fadlan dugsiga ku wargali haddii cunugaagu qabo cudur la is-qabadsiin karo sida bus bus, hunguri/dhuun xanuun iyo injirta madaxa.macluumaad dheeraad ah ayaad ka heli kartaa war-barraahista, (Am I well Enough to Go to School), ama cinwaannada jirrooyinka hoose.
HARGAB CAADI AH(COMMON COLD): Carruurta qaba astaamaha hargabka daran (inta badan qufacaya, sanka biyo ka dareerayaan) ayey ku adag tahay inay dugsiga u dhug lahaadaan. Waxay ku faafin karaan hargabka ardayda kale iyo shaqaalaha, waana inay guriga joogaan. Xusuusnow gacmahaaga oo inta badan aad dhaqdo, isla markaasna marka aad qufacayso ama aad hindhisto aad afkaaga daboosho waa sida ugu wanaagsan ee looga hortago fididda jeermiga caadiga ah
Shubanka La is-qabadsiisyo
QANDHO (FEVER): haddii cunugga xaraaraddiisu gaarsan tahay 100 darajo (afkiisa) ama ka badan tahay, waa inay guriga joogaan ilaa inta ay qandhadu ka jabayso iyagoo daawo qaadan 24 saac gudahooda.
Firiic wajiga, lugaha & gacmaha ka soo baxa
Cudur maqarka ku dhaca yeeshana Burbur iyo Qolfo jaalle ah
Waa Cudur Maqaarka gala